Soo Iibso 5mm Hama Birta Cajiinka Ah ee Loogu Talo Galay Ciyaaraha Halxiraalaha - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan | WoopShop®
Funny 5mm Hama Birta Beads For Puzzles Toys
dib u eegista 21
Color 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 isku qasan Lambarka midabka farriinta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 47
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 isku qasan Lambarka midabka farriinta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 47
Qurxinta 5mm Hama Birta Qurxinta ee Ciyaaraha Halxiraalaha - 26 gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Da'da:> 3 sano jir
Qalabka: Fasalka Cuntada ee EVA
Qaab-dhismeedka hal-xidhaalaha: Jigsaw shaqsiyeed
Digniin: Ma cuni karo
Lambarka Moodalka: FD5413
Magaca Shayga: 5mm Kuul Birta ah
Xirmo: Xidhmo kasta oo ka kooban 1000 qaybood
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 21
Aad baad ugu mahadsantahay iibiyaha, wax walba waxay ku yimaadeen sidii loogu talagalay. Tayada waxay aad ugu egtahay ikeevskie.
Wax walba oo wanaagsan Iyagu bir maahan, ee waa caagag.
Waxaa amar lagu bixiyay Nofeembar 12 waxaana la helay Diseembar 1, gaarsiinta degdegga ah. Luulku wuu fiicanyahay, wali ma aanan tijaabin.
Waxaan dalbaday dhowr midab iyo laba qaab isla mar. Amarku wuxuu yimid saddex toddobaad, xitaa in yar ka yar. Midabada sida sawirka dukaanka, qurux badan.
Aad u fiican oo tayo fiican leh. Mar labaad ayaan weydiin doonaa iibiyahan.